တင်းတိတ်တွေကို ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း ( ၅ ) မျိုး - Real Gaming
တင်းတိတ်တွေကို ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း ( ၅ ) မျိုး
မျက်နှာပေါ် အမည်းစက် ရှိနေတာက မျက်နှာအလှကို မပေါ်လွင်စေပါဘူး။ တင်းတိတ်ဖြစ်နေရင် အရမ်းကို စိတ်ညစ် ရ ပါတယ်။ တင်းတိတ်ကို မိတ်ကပ်ရည်နဲ့ ဖုံးဖို့ ကြိုးစားနေတာထက်စာရင် သဘာဝအတိုင်း ပျောက်ကင်းသွားအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။တင်းတိပ်တွေ ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ သဘာဝ နည်းလမ်းတွေ ကတော့.
တင်းတိတ်တွေကို ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း(၅)မျိုး
( ၁ ) သံပရိုရည်
ပါဝင်ပစ္စည်းများ – သံပရိုရည် ၊ ဂွမ်း ။ သံပရိုသီးကို အရည်ညှစ်ထုတ်ပေးပါ ရလာတဲ့အရည်ကိုခွက်ထဲ ထည့်ပေးပါ။ ဂွမ်းနဲ့ သံပရိုရည်ကိုတို့ပြီး တင်းတိတ်ပေါ် လိမ်းပေးပါ။ (၁၅-၂၀) မိနစ်လောက် နှပ်ထားပေးပြီး မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ တစ်ပတ်ကို (၂) ကြိမ်လုပ်ပေးပါ။
( ၂ ) ရှားစောင်းလက်ပပ်
ပါဝင်ပစ္စည်းများ – ရှားစောင်းလက်ပပ်အနှစ် (စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း) ။ ရှားစောင်းလက်ပပ်အနှစ် ကို မျက်နှာ နဲ့ လည်ပင်း ပေါ် လိမ်းပေးပါ။ (၁၅-၂၀) မိနစ်လောက် နှပ်ထားပေးပြီး ရိုးရိုးရေနဲ့ ဆေးပေးပါ။နေ့တိုင်းလုပ်ပေးပါ။
( ၃ ) ဒိန်ချဉ်
ပါဝင်ပစ္စည်းများ – ဒိန်ချဉ် (စားပွဲတင်ဇွန်း ၂-၃ ဇွန်း) ။ ဒိန်ချဉ်ကို တင်းတိတ်နေရာမှာ လိမ်းပေးပါ။(၁၅-၂၀) မိနစ်လောက် နှပ်နယ်ပေးပါ။ရေနဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ နေ့တိုင်း လုပ်ပေးပါ။
( ၄ ) ပျားရည်
ပါဝင်ပစ္စည်းများ – သံပရိုရည် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း) ၊ ပျားရည် (စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း) ။အနှစ်ပြစ်ပြစ်ဖြစ်အောင် ပျားရည် နဲ့ သံပရိုရည်ကို ရောပေးပါ။ ရလာတဲ့အနှစ်နဲ့ တင်းတိတ်နေရာကို လိမ်းပေးပါ။(၁၅-၂၀) မိနစ်နေရင် မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ တစ်ပတ်ကို (၂) ကြိမ်လုပ်ပေးပါ။
( ၅ ) နနွင်းမှုန့်
ပါဝင်ပစ္စည်းများ – နနွင်းမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း) ၊ သံပရိုရည် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း) ။ အနှစ်ဖြစ်အောင် နနွင်းးမှုန့် နဲ့ သံပရိုရည် ကိုရောပေးပါ။ အနှစ်ရ လာရင် တင်းတိတ်ပေါ် လိမ်းပေးပြီး ခြောက်အောင်စောင့်ပေးပါ။ရေနဲ့ ဆေးပေးပါ။ အပတ်တိုင်း (၁) ကြိမ်လုပ်ပေးပါ။
တငျးတိတျတှကေို ယူပဈသလို ပြောကျကငျးစမေယျ့ သဘာဝနညျးလမျး ( ၅ ) မြိုး
မကျြနှာပျေါ အမညျးစကျ ရှိနတောက မကျြနှာအလှကို မပျေါလှငျစပေါဘူး။ တငျးတိတျဖွဈနရေငျ အရမျးကို စိတျညဈ ရ ပါတယျ။ တငျးတိတျကို မိတျကပျရညျနဲ့ ဖုံးဖို့ ကွိုးစားနတောထကျစာရငျ သဘာဝအတိုငျး ပြောကျကငျးသှားအောငျ လုပျနိုငျပါတယျ။တငျးတိပျတှေ ကို ပြောကျကငျးစနေိုငျတဲ့ သဘာဝ နညျးလမျးတှေ ကတော့.
တငျးတိတျတှကေို ယူပဈသလို ပြောကျကငျးစမေယျ့ သဘာဝနညျးလမျး(၅)မြိုး
( ၁ ) သံပရိုရညျ
ပါဝငျပစ်စညျးမြား – သံပရိုရညျ ၊ ဂှမျး ။ သံပရိုသီးကို အရညျညှဈထုတျပေးပါ ရလာတဲ့အရညျကိုခှကျထဲ ထညျ့ပေးပါ။ ဂှမျးနဲ့ သံပရိုရညျကိုတို့ပွီး တငျးတိတျပျေါ လိမျးပေးပါ။ (၁၅-၂၀) မိနဈလောကျ နှပျထားပေးပွီး မကျြနှာသဈပေးပါ။ တဈပတျကို (၂) ကွိမျလုပျပေးပါ။
( ၂ ) ရှားစောငျးလကျပပျ
ပါဝငျပစ်စညျးမြား – ရှားစောငျးလကျပပျအနှဈ (စားပှဲတငျဇှနျး ၁ ဇှနျး) ။ ရှားစောငျးလကျပပျအနှဈ ကို မကျြနှာ နဲ့ လညျပငျး ပျေါ လိမျးပေးပါ။ (၁၅-၂၀) မိနဈလောကျ နှပျထားပေးပွီး ရိုးရိုးရနေဲ့ ဆေးပေးပါ။နတေို့ငျးလုပျပေးပါ။
( ၃ ) ဒိနျခဉျြ
ပါဝငျပစ်စညျးမြား – ဒိနျခဉျြ (စားပှဲတငျဇှနျး ၂-၃ ဇှနျး) ။ ဒိနျခဉျြကို တငျးတိတျနရောမှာ လိမျးပေးပါ။(၁၅-၂၀) မိနဈလောကျ နှပျနယျပေးပါ။ရနေဲ့ မကျြနှာသဈပေးပါ။ နတေို့ငျး လုပျပေးပါ။
( ၄ ) ပြားရညျ
ပါဝငျပစ်စညျးမြား – သံပရိုရညျ (လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျး) ၊ ပြားရညျ (စားပှဲတငျဇှနျး ၁ ဇှနျး) ။အနှဈပွဈပွဈဖွဈအောငျ ပြားရညျ နဲ့ သံပရိုရညျကို ရောပေးပါ။ ရလာတဲ့အနှဈနဲ့ တငျးတိတျနရောကို လိမျးပေးပါ။(၁၅-၂၀) မိနဈနရေငျ မကျြနှာသဈပေးပါ။ တဈပတျကို (၂) ကွိမျလုပျပေးပါ။
( ၅ ) နနှငျးမှုနျ့
ပါဝငျပစ်စညျးမြား – နနှငျးမှုနျ့ (လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျး) ၊ သံပရိုရညျ (လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျး) ။ အနှဈဖွဈအောငျ နနှငျးးမှုနျ့ နဲ့ သံပရိုရညျ ကိုရောပေးပါ။ အနှဈရ လာရငျ တငျးတိတျပျေါ လိမျးပေးပွီး ခွောကျအောငျစောငျ့ပေးပါ။ရနေဲ့ ဆေးပေးပါ။ အပတျတိုငျး (၁) ကွိမျလုပျပေးပါ။
“အမြိုးသားတှေ စိတျဝငျစားပမေဲ့ အနားမကပျရဲကွတဲ့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အမူအကငျြ့မြား”…
“အမြိုးသားတှေ စိတျဝငျစားပမေဲ့ အနားမကပျရဲကွတဲ့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အမူအကငျြ့မြား”… ယောကျြားလေး တှဟော ဒီလို အရညျအသှေး ရှိတဲ့ အမြိုးသမီး တှကေို ရှိနျတတျကွတယျ … ။ ( ၁ ) ယောကျြားတှရေဲ့ အာရုံစိုကျ ခံရဖို့ မကွိုးစားပဲ ရှိရငျးစှဲအတိုငျး ပွုမူ ပွောဆို ဆကျဆံတတျတာ … ။ ( ၂ ) ကိုယျလိုခငျြတာကို ရအောငျ ယူတတျတဲ့ စိတျအား ထကျသနျ မှုတှေ ရှိတာ … ။ ( ၃ ) ကိုယျ့အား ကိုယျကိုးလိုစိတျ ရှိတာ … ။ ( ၄ …
လူတိုင်း အိမ်တိုင် ဒီလိုလုပ်ရင် ဘုန်းကံနိမ့် လာဘ်တိတ်စေပြီး ဆိုးကျိုးများဖြစ်လာနိုင်သော အကျင့်ဆိုးများ
လူတိုင်း အိမ်တိုင် ဒီလိုလုပ်ရင် ဘုန်းကံနိမ့် လာဘ်တိတ်စေပြီး ဆိုးကျိုးများဖြစ်လာနိုင်သော အကျင့်ဆိုးများ လူတိုင်း အိမ်တိုင်း ဒီလိုနေ ဒီလိုလုပ်ရင် ဘုန်းကံနိမ့် လာဘ်တိတ်စေပြီး ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်လို့ သတိလေးနဲ့ ဆင်ခြင်ကြပါ ။ အစဉ်ရှောင်ကြဉ် ကြရမည့် ဘုန်းကံနိမ့်စေ လာဘ်ပိတ်စေသော အလေ့ဆိုးများ ။ ဘုရားခန်းတွင် လင်မယားနှစ်ယောက် မအိပ်ရ ၂ ။ ယောင်္ကျား၏ ညာဘက်တွင်မိန်းမ မအိပ်ရ ၃ ။ နံနက် ၄ ခွဲ မှ ၆နာရီ အတွင်းတွင် သာသနာစောင့်နတ် နတ်မင်းကြီးလေးပါးသည် လူအများ၏ ကောင်းမှု မကောင်းမှုကို ကြည့်ရှုသော အချိန် ဖြစ်သည် ။ ထိုအချိန်တွင် …
“ မ ကျော် သင့် သော စည်း က လေး များ ”
“ မ ကျော် သင့် သော စည်း က လေး များ ” လူ တစ် ယောက် နဲ့ တစ် ယောက် ကြား မှာ စည်း လေး တစ် ခု တော့ ထား ပေး ပါ သူ ငယ် ချင်း ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ချစ် သူ ချင်း ပဲ ဖြစ် ဖြစ်မောင် နှ မ ကြား မှာ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် နောက် ဆုံး မိ ဘ နဲ့ …